विसर्जनवाद विरुद्ध एकजुट होऔं | Thenextfront
( पालुंगटार बैठकका निर्णयलाई एकीकृत माओवादीको प्रचण्ड-बाबुराम गुटले लत्याएपछि क्रान्तिकारी विचारको रक्षा र विकासका लागि बौद्धिक–सांस्कृतिक क्षेत्रबाट वैचारिक सङ्घर्ष चलाउने उदेश्यका साथ हामीले क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक मञ्च, नेपालको निर्माण गरेका थियौं र यसको विचार सम्प्रेषणका लागि The Next Front लाई माध्यम बनाएका थियौं l यसका विरुद्ध विरोधीहरूबाट मात्र नभएर आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूबाट समेत प्रहार भयो l क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक मञ्च का नाममा कुनै गतिविधि नगर्न भनियो र The Next Front बन्ध गर्न भनियो l नेकपा- माओवादीको निर्माण भएको केही समयपछि क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक मञ्चका गतिविधिहरू बन्द गरिए पनि The Next Front लाई हामीले जारी राखेका छौं l अहिले आएर फेरि हामीले क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक मञ्चलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक ठानेर यो घोषणापत्र केही परिमार्जनसहित पुन: प्रकाशित गरेका छौं l )
साहित्यकला तथा बौद्धिक गतिविधिका माध्यमबाट समाजरूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने हेतुले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा प्रतिबद्ध हामी बौद्धिक–सांस्कृतिक कर्मीहरूले क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक मञ्च. नेपाल गठन गरी यसको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरेका छौं ।
एकीकृत सामन्ती राज्यको स्थापनासँगै नेपाली समाजमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अन्तर्विरोध नयाँ किसिमले विकसित भयो । सामन्ती राजनीतिक स्वार्थलाई हिन्दू धर्म र सामन्ती सांस्कृतिक अहमसित जोडेर नेपाली समाजमा लागू गर्न थालियो । आदि कवि भनेर एक थरी इतिहासकारहरूले स्थापित गरेका भानुभक्तले एकाध असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति दिए पनि उनले सामन्ती आदर्श र अभिजात्य संस्कृतिलाई नै मलजल हाल्ने काम गरे । यिनको तुलनामा गुमानी र यदुनाथहरूकै भूमिका सकारात्मक देखापर्यो । राणाशासनको आरम्भसँगै छाडा र स्तुतिवादी साहित्यले फस्टाउने अवसर पायो । नीतिवादी र रहस्यवादी चिन्तनमा आधारित भए पनि सन्त साहित्य र यसका विचारक ज्ञानदिल दास र योगमायाहरूले हिन्दू अतिवादको विरोध गर्दै सामाजिक विसङ्गतिप्रति प्रहार गर्ने काम गरे । त्यस बेलाको स्थितिमा तुलनात्मक दृष्टिले यो प्रगतिशील चिन्तन थियो ।
बाहिरी समाज, खासगरेर रूस र चीनमा देखापरेका जनजागरणका घटनाले नेपाली समाजलाई पनि घचघच्यायो । ‘लखन थापा विद्रोह’ र ‘मकै पर्व’ हुँदै विरोध र विद्रोहको स्वर ‘लाइब्रेरी पर्व’को रूपमा प्रस्फुटन भयो । यो नेपाली समाजमा बौद्धिक विद्रोहको पहिलो सचेत विष्फोट थियो । यसबीच भएको सहिदकाण्डले विद्रोहचेतलाई नयाँ उर्जा र ऊँचाइ प्रदान गर्यो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र गोपालप्रसाद रिमालको विद्रोहचेतले समाज, सिर्जना र स्रष्टाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गर्यो । यसै क्रममा नेपाली समाजमा मार्क्सवादी दर्शन, विचार र राजनीति पनि क्रमिक रूपमा फैलिंदै गयो । राणाविरोधी आन्दोलन र चीनमा भएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको आलोकमा २००६ (सन् १९४९) सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । यसै बेलादेखि स्वस्फुर्त लेखनले प्रस्ट रूपमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण पायो । पक्षधरता र प्रतिबद्धताको अवधारणा र सिद्धान्तले पनि यसै बेलादेखि नयाँ मूल्य र मान्यता प्राप्त ग¥यो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कहिले दरवारपरस्त त कहिले भारतपरस्त प्रवृत्तिका विरुद्धका साथै कहिले दक्षिणपन्थी अवसरवाद त कहिले जडसूत्रवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दे अघि बढ्यो । ‘झापा विद्रोह’ र नेकपा चौथो महाधिवेशनको गठनपछि यसले केही नयाँ गति लिए पनि विक्रमको चालिसको दशकमा पुग्दानपुग्दै यसमा विभाजन र विखण्डनका प्रारूपहरू देखिन थाले । सारसङ्ग्रहवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्धको सङ्घर्ष तीव्र बन्दैगयो र यसैका बीचबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) को निर्माण भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( मशाल) ले सबै थरी विचलन र विभ्रमका विरुद्ध सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउँदै लग्यो । यसले मालेमाको मूल्य र आदर्शलाई अगाडि राखेर दीर्घकालीन जनयुद्धको आवश्यकता र औचित्यमा जोड दियो । मशालको क्रियाशीलता र अगुवाइमा भएका एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियासंगै २०४७ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकताकेन्द्र) को निर्माण भयो ।
२०४६ को आन्दोलन पछि बौद्धिक–सांस्कृतिक आन्दोलनलाई नयाँ किसिमले गति दिन वातावरण केही सहज भए पनि आमूल परिवर्तनको यात्रा अझै बाँकी थियो । संसदीय सुधारवाद र सारसङ्ग्रहवादी गोलचक्करबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुक्त पारेर नयाँ गति र दिशा दिने महान् योजना र अभियानकै क्रममा २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी) को विकास भयो । यसले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि महान् जनयुद्धको आरम्भ गर्यो । यस महान् अभियानले साहित्य–कला र सिङ्गो बौद्धिक—सांस्कृतिक आन्दोलनलाई नयाँ विचार, दिशा र गति प्रदान गर्यो ।
बौद्धिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको यस इतिहासमा निश्चित कालखण्डमा निश्चित पात्रले खासखास भूमिका खेलेका छन् । यो इतिहासमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, गोपालप्रसाद रिमाल, केवलपुरे किसान, गोकुल जोसी, युद्धप्रसाद मिस्र, पारिजात र चैतन्यहरूको भूमिका ऐतिहासिक रहेको यथार्थ पनि सर्वविदितै छ । खासगरेर दक्षिणपन्थी पलायनवाद, सारसङ्ग्रहवाद र अराजकतावादका विरुद्ध क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक कर्मीहरूको नेतृत्वमा भएका वैचारिक सङ्घर्षहरू ऐतिहासिक महत्त्वका रहेका छन् ।
राजनीतिक क्षेत्रको जस्तै नभए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका विविध प्रवृत्तिहरू बौद्धिक–सांस्कृतिक आन्दोलनमा पनि रहेका छन् । सामन्ती संस्कृतिका साथै अहिले क्रान्तिकारीहरूले लड्नु परेको मूल लडाइंमा उत्तरआधुनिकतावादी शून्यवादका विरुद्ध छ । त्यतिमात्र नभएर कम्युनिस्ट आन्दोलनका झैँ बौद्धिक–सांस्कृतिक आन्दोलनभित्र पनि दक्षिणपन्थी अवसरवाद, सारङ्ग्रहवाद, क्रान्तिकारी रूपवादका विरुद्ध पनि क्रान्तिकारीहरूले निरन्तर लडिरहनु परेको स्थिति छ ।
महान् जनयुद्धको विकास र निरन्तरतामा सबै किसिमका विचलन र विसङ्गतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै अघि बढेको र पछिल्ला दिनहरूमा पनि महान् जनयुद्धका आदर्श र क्रान्तिकारी निरन्तरताप्रति प्रतिबद्ध प्रवृत्ति नै अहिलेको बौद्धिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति हो । क.यसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई आफ्नो मूल पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्दछ । ख. यसले ‘चिनिया“ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’को मूल भावलाई केन्द्र मान्दछ । ग.यसले प्रतिबद्धताको मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ । घ.यसले ‘पोलिटिक्स इन कमाण्ड’को माओवादी अवधारणलाई आधार मानेर अघि बढ्दछ । ङ यसले महान् जनयुद्धका क्रममा निर्मित र विकसित सौन्दर्य, आदर्श र मूल्यलाई मूल प्रस्थानविन्दु बनाऊँछ र च. यसले नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न जनयुद्धको बाटोलाई आत्मसात गर्छ l
को क्रान्तिकारी हो होइन अथवा कुन साँस्कृतिक-बौद्धिक संस्था क्रान्तिकारी हो होइन भन्ने कुरा माथि उल्लेखित मन्यताप्रतिको आत्मसातीकरणबाट थाहा पाउन सकिन्छ l
विभिन्न पार्टीहरूका आफ्नै साहित्यिक-सांस्कृतिक मोर्चा र बौद्धिक मञ्च र मोर्चाहरू छन् र जनसाहित्यकै नाममा पनि विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरू अस्तित्वका रहेका देखिन्छन् । यसरी हेर्दा यो मञ्चले पनि एउटा थप सङ्ख्या थपेको छ भन्न सकिन्छ । परन्तु यसको स्थापना एउटा नाम र सङ्ख्या थपिनुमा मात्र सिमित छैन । यसको गठन क्रान्तिकारी मूल्य–मान्यता, लक्ष्य, नीति, योजना र प्रतिबद्धताका साथ भएको व्यहोरा हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौं ।
अहिले पनि मार्क्सवाद–लेनिनवाद-मओवादको नाम राखेर गतिविधि गरिरहेका संस्थाहरू नभएका होइनन् । तर यस्ता नामधारी कतियय संस्थाले जनसंस्कृतिको निर्माण र बौद्धिक गतिविधिका नाममा मार्क्सवादकै भ्रष्टीकरण गर्दै विकृति र विभ्रम फैलाइरहेका छन् । तिनीहरूसित क्रान्तिकारीहरूको सोझै टक्कर पर्नु स्वाभाविक छ । कुरामा मालेमा भन्ने तर व्यवहारमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र नवसारसङ्ग्रहवादको अभ्यास गर्ने, शब्दमा ठूलाठूला र तडकभडक प्रवृत्ति देखाऊँने र व्यवहारमा चाँहि विचारविहीन भीडतन्त्र जम्मा पारेर रमाइलो गर्ने ‘क्रान्तिकारी–रूपवादी’ प्रवृत्ति पनि हाम्रो आन्दोलनमा बडो डरलाग्दो किसिमले देखापर्न थालेको छ । यसले मार्क्सवादभित्र उपयोगितावाद र उत्तरआधुनिकतावादी उपभोक्तवादको प्रवेशलाई सहज बनाएको छ । यस किसिमको विचलनले लिने बाटो भनेको अन्ततः विसर्जनवाद नै हो । हामी यसका प्रारूप पनि व्यवहारमा देखिरहेका छौं । दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमात्र नभई मध्यपन्थी अवसरवाद अर्थात् नवसारसङ्ग्रहवाद र क्रान्तिकारी–रूपवादी विसर्जनवादका विरुद्धसमेत लड्नु आजको आवश्यकता हो । हामी यिनै आवश्यकता पूरा गर्ने कटिबद्धताका साथ सङ्घर्षको मोर्चामा आएका हौं ।
१ यसले मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओवादलाई आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्दछ ।
२.यसले ‘चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ को मूल्य र मर्मलाई मूल आधार बनाऊँछ ।
५.यसले महान् नेपाली जनयुद्धले निर्माण गरेको सौन्दर्यमूल्य र आदर्शलाई प्रस्थानविन्दु बनाऊँछ र क्रान्तिको बाँकीकार्यभार पूरा गर्न जनयुद्धको बाटोलाई आत्मसात गर्छ l
त्यसैले क्रान्तिकारी बौद्धिक–सांस्कृतिक मञ्च, राष्ट्रियता र जनगणतन्त्रको पक्षमा र सबै किसिमका अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्ध गोलबद्ध भई महान् विद्रोहको आ“धी सिर्जना गर्न सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र देशभक्त बुद्धिजीवी तथा सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
सबैखाले अवसरवादविरुद्धको लडाइंलाई तीव्र बनाओँ।
विसर्जनवादका विरुद्ध एकजुट होओँ।
महान् जनयुद्धको झन्डालाई माथि उठाओँ
« ”बर्की नम्बर १३९९९” अर्थात् नयाँ प्रतिबद्धता
२०५२ साल फागुन १ को पर्चा »